Roberto Mancini oo loo magacaabay Tababaraha xulka qaranka ee Talyaaniga… – Hagaag.com
Roberto Mancini oo loo magacaabay Tababaraha xulka qaranka ee Talyaaniga…
Posted on 15 Maajo 2018 by Admin in Sports // 0 Comments
Tabbabarihii hore ee koxda Manhester City Roberto Mancini ayaa loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda xulka qaranka kubadda cagta ee Talyaaniga.
Ninkan 53 sano jirka ah ayaa labo sano oo qandaraas ah la galaya kooxda qaranka Talyaaniga kaddib markii shaqada laga ceeyriyay tabbarihii hore ee Talyaaniga Gian Piero Ventura oo isagu la sheegay inuu ku guuldaraystay in kooxdiisa ay ka qayb galaan koobka cayaaraha adduunka.
Roberto Mancini waxay shaqadan u noqonaysaa in markii ugu horreysay uu noqdo maamule heer caalami ah, wuxuuna kasoo tagey naadiga Ruuushka ee Zenit St Petersburg si uu u buuxiyo booskani loo soo magacaabay.
Mancini wuxuu u horseeday kooxda Manchester City inay kaalin waanagsan gasho muddo 44 sano ah.
Illa markii uu ka tagey garoonka Itixaad sanadkii 2013-kii, Mancini wuxuu maamule kasoo noqday kooxaha kala ah Galatasaray iyo Inter Milan ka hor inta uusan ku biirin Zenit bishii june ee sanadkii 2017-kii.
Wuxuu Axaddii joojiyay qandaraaskii uu kula jiray naadiga Ruushka si uu u hoggaamiyo kooxda dalkiisa ee Talyaaniga halkaaso uu 36 jeer usoo cayaaray.